TAOM-BAOVAO MALAGASY 13-14 MARSA : Nakotrokotroka ny fanokafana ny fankalazana
Nakotrokotroka ny fanokafana ny fankalazana ny Taom-baovao malagasy natao tetsy amin’ny Tahala Rarihasina, Analakely, omaly. 12 mars 2021
Velatseho sy velakevitra no tena nibahan-toerana nandritra ny hetsika.
Ny fikambanana Malagasy Iray Hasina (Maiha), tarihin’ny filoha mpanorina, Victorio Randriamihanta no mikarakara sy manatontosa azy ity. Ny 01 Janoary 2021, maizim-bolana no fankalazana ny Taom-baovao gregoriana izay iarahan’izao tontolo izao manaiky.
Mankalaza io koa ny Malagasy saingy tsy manary ny nentin-drazana sy izay mampiavaka azy. Araka ny fanazavan’ny filohan’ny Maiha, ny 13-14 Marsa 2021 no tokony hankalazana ny Taom-baovao malagasy manerana an’i Madagasikara sy any andafin’ny riaka. Tsinana ny 13 marsa 2021 amin’ny 1 ora sy 22mn antoandro mantsy ny volana amin’io fotoana io. Io 13 Marsa 2021 io izany no faran’ity taona malagasy diavina ity sy hanaovana ny fidiovana. Midio i Madagasikara amin’io fotoana io. “Ny rivotra, rano, afo, masoandro mifandimby amin’ireo vanim-potoana rehetra no manadio an’i Madagasikara”. Ny 14 Marsa 2021 kosa no ho taza-maso eto Madagasikara ny volana tsinana, ka io tsinam-bolan’ny 14 Marsa 2021 io noho izany no andro voalohany amin’ny taona malagasy vaovao sy hankalazantsika ny Taom-baovao malagasy. Tsy mankalaza Taom-baovao amin’ny maizim-bolana sy amin’ny daty tsy miova ny Ntaolo fa amin’ny tsinam-bolana hatrany.
Anatin’ny fiantombohan’ny vanim-potoana fararano eto Madagasikara io 13 sy 14 Marsa 2021 io, izay mampitombo ny hasin’ny zavaboary satria betsaka tsy ritra ny rano sady mahazina ny zavaboary rehetra eto Madagasikara. Miakatra ihany koa ny vokatra vary sy katsaka sy mangahazo eran’i Madagasikara amin’io fotoana io, matavy ny omby sy ny biby amam-borona, maitso mavana ny zava-maniry. “Tonga amin’ilay fitenenana hoe : "Fararanon-danonana" araka ny fomba fijerin’ny “Malagasy iray hasina” hatrany.
Resy lahatra ny “Maiha” fa efa maro amin’izao fotoana ny Malagasy na fikambanana na tokantrano na mpinamana na sekoly sy toeram-piasana manerana an’i Madagasikara no efa miandry sy vonona amin’ny fankalazana ity datin’ny Taom-baovao malagasy ity. Afaka mikarakara sy mitarika ny fankalazana ny “Taom-baovao malagasy” ny Malagasy rehetra amin’ny toerana sy Faritra misy azy avy tsy anavahana fiaviana, finoana, firazanana. Malalaka ihany koa ny fomba fankalazana azy ity, miankina amin’ny tsirairay na fikambanana na tokantrano na vohitra araka izay fomba fanao isa-tokantrano, na isaka ny sekoly sy toeram-piasana na isa-pikambanana na isa-paritra sy isa-paritany.